2075 फाल्गुन 6, सोमबार
जिम टाइम : सन्ध्याको यस्ताे छ फिटनेस मंत्र (भिडियो)
सिनेपाटी | प्रकाशित: २०७५, जेष्ठ २, बुधबार
कार्यक्रम प्रस्तोता, मोडल हुँदै चलचित्रमा प्रवेश गरेकी नायिका हुन् सन्ध्या केसी । उनले पहिलो चलचित्र ‘ड्रिम्स’ अनमोल केसीसँग गरेकी थिइन । तर पहिलो चलचित्रमा सन्ध्याका खासै सम्झन लायक सिनहरू छैनन् । आफूलाई नायिकाको रूपमा परिचित गराउने दौडमा रहेकी सन्ध्या अभिनित गत वर्ष ‘छक्का पञ्जा २’ र ‘ह्याप्पी न्यु इयर’ प्रदर्शनमा आए । तर विडम्बना दुवै चलचित्रबाट उनलाई हातमा लाग्यो शून्य जस्तै भइदियो ।
चलचित्रमा खासै जम्न नसकेकी सन्ध्या फिटनेसमा भने निकै ध्यान दिन्छिन् । उनी हरेक दिन माहराजगञ्ज स्थित जिमखानामा आफूलाई फिट राख्न पुग्ने गर्छिन् । जिममा सन्ध्याको प्रत्येक दिन २ घण्टा बित्ने गर्छ । ‘जिम आउँदाको फिलनै फरक हुन्छ । तनावमुक्त हुन्छ अनि फ्रेस हुन्छु ’ सन्ध्या भन्छिन् । शशिर परिवर्तनको लागी भन्दा पनि भविष्यमा पनि आफू फिट रहन जिम व्यायमहरु गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
युट्युवमा रुचाइयो ‘सी–ओे–डब्लु काउ’, पुन ट्रेन्डिङ नम्बर एकमा
आर्यनले घाँटीमा खोप्दा साम्राज्ञीले कहा खोपिन् ट्याटु ?
अवार्डमा कलाकारको फेसन (फोटो फिचर)
प्रिमियरमा ‘शेरबहादुर’को प्रशंसा, यसो भन्छन् कलाकारहरू
कता हराइन् ‘एश्वर्य’ नायिका दीपिका प्रसाई ?
‘शेरबहादुर’ प्रिमियरकाे रमझम (फाेटाे फिचर)
फिल्मसँगै व्यवसायमा हिट छन् यी कलाकार
Paul, Aanchal देखि Deepa, Deepak सम्मले यसो भने शेरबहादुर लाई | Sherbahadur
अनुपको ‘पुरानो बुलेट’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
वर्षा र संजोगको रिसेप्सन पार्टीमा को–को पुगे कलाकार? (फोटो फिचर)
‘परी' को निर्माण घोषणा, विपिन र श्रृष्टीको जोडी
वर्षा र संजोगले गरे इन्गेजमेन्ट, यस्तो बन्यो माहौल (भिडियो)
सलिनमानको ‘यात्रा’ को शिर्ष गीत रिलिज (भिडियो)